ABATYALI BECINGO ABAHLE ABA-45 (IHOMBISA IGADI YAKHO YOCINGO) - IZITIYA KUNYE NOKUHLALWA KOMHLABA
Eyona izitiya Kunye Nokuhlalwa Komhlaba Abatyali becingo abahle aba-45 (ihombisa igadi yakho yocingo)
Abatyali becingo abahle aba-45 (ihombisa igadi yakho yocingo)
Wamkelekile kwigalari yethu yezicwangcisi zocingo ezintle.Ucingo oludala oludinayo ngamanye amaxesha lunokuba ngumbono ongathandekiyo, kodwa endaweni yokuvumela amaplanga angacacanga ukuba abe ngamehlo kwindawo entle, zama ukunxiba ucingo lwakho ngeendlela ezahlukeneyo zokuhombisa. Ucingo lunokusetyenziswa njengendawo yangasemva kwindawo enomdla egxile eyadini okanye kwindawo engaphandle. Apha ngezantsi sabelana ngeendlela ezahlukeneyo zokuphucula ucingo lwakho lwegadi kunye nabatyali beentyatyambo kwaye ujike iyadi yakho ibe yinto emangalisayo.
Ucingo lubonelela ngethuba lokusebenzisa ngokufanelekileyo nayiphi na indawo yangaphandle, nokuba ingaba iyanda okanye ilinganiselwe ngobukhulu. Ngokwesiqhelo yamkelwe njengendawo engakhathalelwanga, iingcingo zinokusetyenziselwa ukongeza izinto ezibonakalayo ezibonakalayo zekhaya.
Zininzi iindlela zokucoca ucingo. Kungenziwa ngeendlela ezahlukeneyo-kwivenkile kuthengiwe iimbiza zokuhombisa kwizisombululo ezinjengekhaya zokuphinda wenze injongo kunye nokuhamba ngebhayisekile, kodwa eyona ndlela ilula yokongeza i-aesthetics kuyo kukusetyenziswa kwezicwangcisi zocingo. Iintyatyambo ezizaliswe ziintyatyambo kwangoko zongeza umbala wombala kunye nesitayile kwiingcingo ngaphandle kokushiya umngxunya epokothweni yakho. (Esi sithuba siyinxalenye yethu Uyilo locingo Isikhokelo sokugqibela)
Iibhokisi zokutyala ucingo
Ukuhonjiswa kwentsimbi yentsimbi kunye nabatyali
Abatyali abaxhonyiweyo becingo
Iimbiza zeentyatyambo ezibiyelweyo
Ingca yeHerb ecingweni
Iintyatyambo eziPhezulu zokunyuka kweencingo
Nazi ezinye izibonelelo yokusebenzisa izixhobo zokutyala ukubiya ngocingo:
• Yongeza i ukunqanda isibheno Yekhaya. Izicwangcisi zocingo zenza iyadi ibonakale ngakumbi kwaye imeme iindwendwe.
• Inika ithuba elifanelekileyo loku wandise igadi yakho . Izixhobo zokucoca ucingo zilungele kakhulu izindlu ezinendawo encinci yeeyadi kuba ikuvumela ukuba wandise indawo engasetyenziswanga. Ikwayindlela efanelekileyo yokuzama igadi ethe nkqo.
• Inokusetyenziselwa gubungela iimbono ezingathandekiyo . Ukufihla udonga lomjikelezo ngokuhlakulela izidiliya ezikhula ngokukhawuleza kunye nezityalo ezilandelelweyo.
• Inika lula kwigadi . Izityalo kulula kakhulu ukufikelela kuzo kwaye zinokutshintshwa ngokukhawuleza xa kufuneka njalo. Ikwaphelisa umsebenzi ongcolileyo njengokwemba imingxunya yeziza zegadi.
• Yonyusa i ukuqonda kobunzulu nokuphakama ocingweni.
• Izicwangcisi zocingo nazo zisebenza kakuhle njengokongezwa Ikhusi labucala .
• Ngu ithambisa iimpawu zokwakha kunye nolwakhiwo lwendlu. Abacwangcisi becingo banciphisa ifuthe lezinto zasezidolophini kuba banegalelo kwimvakalelo yendalo. Ucingo oluneziqulatho ezizaliswe zizityalo lujongeka luyindalo ngakumbi xa kuthelekiswa nocingo oluyinyithi.
• Iyanceda ukukhula Imozulu encinci ngaphakathi kweyadi. Ucingo olubiyeleyo olugutyungelwe sisixa esikhulu sezityalo luxutywe kakuhle njengoko izityalo zilawula ubushushu ngokwenza umthunzi kunye nokupholisa.
• Yi isebenza kakuhle emalini . Izicwangcisi zocingo ziyafumaneka ngokulula kwimarike kwaye iindleko eziphantsi njenge- $ 3 ngesiqwenga ngasinye.
• Yi luncedo kwizityalo . Ukujikeleza komoya kungcono kuba izityalo ziphakanyiswa emhlabeni. Zikhula zisempilweni kwaye akukho monakalo ungaphantsi. Ngaphandle kwalonto, akukho sidingo sokukhathazeka malunga nezilwanyana zasekhaya ezitshabalalisa izityalo zakho kuba zibekwe kwinqanaba eliphezulu.
• Yi kulula ukuyifaka . Izicwangcisi zocingo zihlala zixhonywe kwiipokethi ezinamakhonkco alula okanye izixhobo ezinyukayo, akukho ndibano inyanzelekileyo ifunekayo.
• Ngokubanzi, izixhobo zokucoca ucingo konga indawo, ixesha, umgudu kunye nemali .
Zeziphi iintlobo zezityalo ezifanelekileyo ukusetyenziswa kwizicwangcisi zocingo? Kwizikhongozeli zezityalo eziya kuxhonywa okanye zilungiswe kwiipili zocingo, iintlobo ezingapheliyo zonyaka zeentyatyambo nezityalo zilungile kuba zikhula unyaka wonke. Iindidi zeentyatyambo ezinje nge-petunias, i-verbena, i-bidens, i-calibrachoa kunye ne-chenille zilungile xa ufuna ukufezekisa ingxangxasi enombala njengokutshiza kombala okoko ezi zityalo zichitheka kwimiphetho yeekhonteyina njengoko zikhula.
Izihlahla zodonga kunye nokunyuka kwabahambi kukukhetha okuphezulu ukuba ufuna ukugubungela udonga olupheleleyo lomjikelezo okanye ukuba ufuna ukuqeqesha imidiliya ukuba ikhule iye kubingo lwakho. Imidiliya ye-evergreen ingenza ukuba ucingo lwakho lubonakale lulungile unyaka wonke kodwa lujolise ngakumbi kumagqabi anje nge Persian Persian, Ivy yesiNgesi, Boston Ivy, Creeping Fig kunye neCarolina Jessamine. Imidiliya yeentyatyambo ikwenyuka kodwa ibonelela ngeentyatyambo ezintle. Ezinye zeentlobo zayo ezithandwayo ziya kuxutyushwa njengoko uqhubeka nokufunda kwinqaku lethu.
Apha ngezantsi kukho izimvo zocingo zokuhombisa onokuziphonononga njengoko usonyusa ucingo lwakho. Siyathemba ukuba uyakhuthazeka njengathi.
Ibhokisi yokutyala ibhokisi sisixande esisetyenziselwa ukukhulisa izityalo kunye neentyatyambo ezizinzileyo, ezixhonyiweyo okanye eziqhotyoshelwe kwiileyili zocingo okanye iipikethi. Olu hlobo lokuhonjiswa kocingo lulungele ukukhula kwiintlobo ngeentlobo kunye nesixa esikhulu sezityalo kuba ubukhulu kunye nokumila kwayo kunokuphatha ngakumbi xa kuthelekiswa neembiza.
Ephezulu ngaphezulu kolu cingo lwamaplanga sisiqwenga sebhokisi yeentyatyambo yeplanga ezaliswe ziintyatyambo ezimfusa, zeapilkosi kunye nezityheli ezimthubi. Abatyali bocingo banokuphucula kwangoko ukubonakala kocingo ngaphandle kokusebenza nzima.
Udonga lokuma simahla lweplate yokutyala kunye ne-pink petunias epinki ijongeka intle ngokuchasene nomthi opheleleyo womsedare. Olu hlobo loyilo lokutyala ucingo lunokwenziwa ngokugcina ikreyiti yeziqhamo ezindala ngokudibeneyo kwaye uzinyuse usebenzisa inkqubo yenkxaso.
Iibhokisi zeentyatyambo ezihambisekayo ezibekwe ngaphezulu kwale pilisi yomgangatho weesiporo zithambisa izinto zokwakha zale ndawo ingaphandle. Uyilo lwesixhobo sokutyala ucingo lusebenzisa isixhobo sokuhombisa ibhokisi yentsimbi egcinwe yimicu ye-moss.
Iibhokisi zezityalo zeplastiki zinokuncamatheliswa ngokulula kumgaqo wesitimela kunye nokusetyenziswa kwezibiyeli kunye neehuku. Ipatio encinci yedesika iguqulwa yaba yindawo yokuhlala ngokuhlakulela ukhetho olubanzi lwamagqabi kunye neentyatyambo kwiindidi ezahlukeneyo zezikhongozeli zezityalo. Ukutyala ucingo kuyindlela entle yokuhlaziya uyilo lomgangatho kwaye ziluncedo ngakumbi kwizithuba ezincinci.
Indawo yokutyala ngololiwe we-Resin
Lo matshini wokucoca ucingo we-resin ulungiswe ngokulula ngaphezulu komgaqo wocingo ngenxa yesakhiwo esifunyenwe ngaphantsi kwawo. Olu hlobo lwezixhobo kulula ukulugcina, luzinzile, ubungqina bezinambuzane kwaye alunakubola nkqu nangokuhlala ubushushu nobushushu.
Esi sitiya siguqulwe saba ngumoya ojikelezayo njengoko ujikelezwe yingqokelela enkulu yezityalo eziqhakazayo. Isithuba esingaphandle siphila kunye nokusetyenziswa kweentlobo ezahlukeneyo zezikhongozeli zezityalo ezisasazeke kuwo wonke umjikelo wocingo - ukusuka kwiibhasikiti ezijingayo, kwiimbiza zeterracotta kunye neebhokisi zeentyatyambo zentyatyambo.
Ibhokisi ende ende eyenziwe ngamaplanga enebrakethi esecaleni yenza ibhedi elula kodwa esebenzayo yokutyala izityalo ezinemingxunya kunye nemidiliya enyukayo. Ngaphandle kokuba yindlela efanelekileyo yokunxiba ucingo, ikwancedisa izixhobo kunye nobuhle bendalo bocingo olubomvu emva kwayo. Ezi ntlobo zokutyala nazo zikhulu njenge iibhokisi zeentyatyambo zefestile kwaye inokuxhonywa ngaphantsi ukukhanyisa izimvo.
Iqhekeza lomthi lisetyenziswa ngokuyilayo njengebhokisi yeentyatyambo exhonyiweyo kolu cingo lwamaplanga. Ubuhle bokusebenzisa olu hlobo lwempahla kukuba ukubonakala kwayo kuyatshintsha ngokumangalisayo njengoko kubudala kunika ucingo lwakho ukubonakala kwendalo okungafaniyo.
Ngaphandle koqeqesho kwimidiliya yokunyuka ukuze ukogqume ngokupheleleyo udonga lweperimeter, sebenzisa indawo ethe nkqo ngokongeza inqaku lamanzi kucingo lwakho. Kuyamangalisa ukubona indlela izityalo ezinokuthi zithambe ngokulula izinto ezinzima kwaye zizise izinto zokwakha ebomini.
Iinkuni ezifunyenweyo, iibhafu ezindala zokuhlamba kunye neetoti zobisi zineeplani ezifanelekileyo zocingo zocingo lwesitayile njengoko zikhupha i-rustic yelizwe. I-petunias enemibala kunye nezinye iintyatyambo ezinobungqingili zongeza umdla obonwayo kwaye zenza olu cingo luchume ngesibheno sokunqanda.
Ukutyala kwe-resin engunxantathu ebekwe ngaphezulu kwetreyini kukongeza ukuphakama kunye nemfihlo kule ndawo yepati. Uninzi lwabanini bamakhaya lukhetha olu hlobo lokutyala ucingo kuba ubukhulu balo bunokubamba ingqokelela yezityalo.
Izicwangcisi zocingo zikulungele ukuthambisa izinto zokwakha kunye nolwakhiwo lwendawo engaphandle. Iingcingo zentsimbi, umzekelo, zinenkangeleko eyomeleleyo kwimizi-mveliso kwaye abanye banokuyifumana ngokungaboniyo inombala kunye nokuhombisa. Eyona ndlela ilula yokujongana nalo mbandela kukuxhoma, ukubeka okanye ukubeka imigqomo yeentyatyambo ezaliswe ziintsimbi ezenziweyo okanye iingcingo zentsimbi. Igalelo umahluko ofunekayo kumbala kwaye yongeza umahluko kubume ngokunjalo.
Iitulips ezikhazimlayo zigcwalisa i-resin terracotta njengeembiza ezixhonywe kwiilili ezithe tyaba zolu cingo lwesinyithi. Ngaphandle kokongeza isibheno sokunqanda, ikwanika abadlulayo umbono omema kunye nohlaziyayo wokonwabela.
Iimbiza ze-resin zokugcina i-resin kunye ne-moss fibers indlu imixube enemibala ye-pansies ehlaziya ubume bentsimbi ebiyelweyo yentsimbi kunye nodonga lwezitena olungqongileyo.
UMtyali woLoliwe waMatye kunye neentyatyambo-Umthombo
Isityalo sokucoca intlaka emacaleni amabini sivumela abaninimzi ukuba basebenzise izithuba ngaphakathi nangaphandle kweyadi yakho, ngaxeshanye. Bahlala ngaphezulu kocingo, i-balcony okanye i-deck railing ngaphandle kwesidingo sokwanda kwe-Hardware- indlela elula nesebenzayo yokugcina iingcingo ziphila ngemibala.
Ingxangxasi yeentyatyambo ezibomvu igqobhozela kamnandi kule konkrithi yentsimbi yentsimbi kwaye izisa ukubambeka ngokuqinileyo kumgaqo wendlela wale ndawo yokuhlala.
Ngaba ndiyawurhoxisa umtshato wam kaJune?
Ukuxhoma izityalo zokubiya kuthathwa njengenye yeendlela ezilula zokunxiba ucingo. Njengokuba uninzi lwezinto zokutyala ezixhonyiweyo zize nekhonkco lokudibanisa okanye ikhonkco, ukufakela kulula njengokukulengisa ecaleni kweepokethi okanye iihanger ezikhethekileyo ezijijelweyo kucingo. Iziqwengana zisenokusetyenziselwa ukubamba ngokuqinileyo ukutyala izicwangciso zocingo endaweni yazo. Inokuxhonywa yodwa okanye ngokwamaqela, inokudityaniswa nezinye izinto kunye nokuhonjiswa ukwenza isiqwenga somsebenzi wobugcisa ocingweni lwakho. Izinto eziqhelekileyo ezisetyenziselwa ukuxhoma izixhobo zokucoca ucingo ziyintsimbi kunye neentsimbi ze-moss, iibhasikiti eziphothiweyo, i-resin, iplastiki kunye neenkuni. Ukuba ufuna ukwenza izinto ezintsha, ungasebenzisa izinto zakho, ezinje ngejagi yeglasi, iibhotile okanye iinkonkxa.
Ukutyala okutyibilikisiweyo kwizikrini ze-lattice kuzisa ubomi kubulula beli patio. Indawo yokuhlala engaphandle ijongeka ngathi yeyakho ngakumbi njengoko ii-decors zodonga zongezwa ukunika uphawu ngakumbi kwisithuba.
Izimbiza zezityalo zeGlaze zeceramic kunye nezityalo zokuxhoma ucingo zisebenza njengezinto zokuhombisa kule patio. Iibhasikiti ezixhonyiweyo ezineentyatyambo ezihlwayelayo zibekwa kubude obude ukuvumela imidiliya ukuba ihambe kwaye ihambe ngokukhululekileyo.
Umtyali weplastiki wePlastiki wezityalo ezixhonyiweyo - uMthombo
Izityala zeplastikhi zodonga, njengalezo ziboniswe apha ngasentla, zinokuvuleka okukhulu okuvumela abaninimzi ukuba bakhule kwaye bonwabele isixa esikhulu seentyatyambo. Inomqolo obanzi owenza ukuba ilungele ukunyuka ezindongeni kunye nakucingo olupheleleyo lwabucala. Ukongeza kuloo nto, imilo yayo enesiqingatha ejikelezayo ikwajongeka intle xa izaliswe kukugcwala okuphuma kweentyatyambo kunye nemidiliya.
Umtyali oxhonywe ngocingo kunye neentyatyambo- Attribution # 1
Isityali sebhaskithi ephothiweyo sixhomekeke kwisiqwenga sebracket yentsimbi yokuhombisa kucingo lwebhodi olupheleleyo. Umbala wokhuni wendalo wocingo usebenza njengendawo yokugqabhuka kwemibala evela kuhlaziyo oluhlaza okwesibhakabhaka i-petunias, i-marigolds etyheli kunye ne-geraniums ebomvu.
Imithana enembiza eneentyatyambo ezincinci ezixhonywe kwiingcingo azoyiki isitayile esincinci sale ndawo yangaphandle. Oku kukwaphula ubumbano lwemibala engathathi hlangothi kwiileyili zocingo, iindonga zepherimitha kunye nesango.
Iingqayi zentyatyambo ezibiyelweyo zizimeleyo, ziyahanjiswa kwaye zilungile izitya zezityalo ezihlala zibekwe phezu kojelo locingo. Inokulungiswa kwakhona okanye ifakwe ocingweni kusetyenziswa amagwegwe, izibiyeli okanye izixhobo ezixhasayo. Iimbiza zentyatyambo ezibiyelweyo zifumaneka ngokulula kwiivenkile ezininzi kwaye zifikeleleka kakhulu. Xa kuthelekiswa nezicwangcisi zocingo ezakhelweyo, iingqayi zeentyatyambo zocingo ziyaphatheka kwaye ziluncedo ngokuhamba. Ukuba kukho imfuneko yokubeka izityalo ngaphakathi okanye ukufuduselwa kwenye indawo, emva koko inokuhanjiswa ngokulula.
Uyilo olumkileyo, iimbiza zeentyatyambo zocingo ziza kuluhlu olubanzi lwezixhobo kunye nemibala eyahlukeneyo. Ihlala yenziwe ngeplastikhi, i-resin, ilitye, iterracotta kunye neceramic. Iimbiza zentyatyambo zokubiyela zentsimbi ziyafumaneka kwimarike kodwa zisebenza njengeembiza zokuhombisa zokugcina izindlu zezikhongozeli eziqhelekileyo. Iingqayi zeentyatyambo ezibiyelweyo zikwajongwa njengendawo yokulungisa uninzi lwabanini makhaya kuba akukho fakelo lufunekayo.
Iitayi ezimibala-bala zinemiphanda yeentyatyambo ezithandekayo, ezithandekayo kunye nezongezo ezithandekayo kolu cingo lumhlophe. Umxube onomdla weentyatyambo ezimbejembeje kunye nemidiliya ekhasayo inegalelo kumawaka ama-hues aqaqambileyo enza ukuba oku kube liliso ekubambeni kwindlu.
Iimbiza zentyatyambo ezinombala ocingweni - Imvelaphi
Ezi zitena ziphilayo zinakho iipeyile zizincedisi ezifanelekileyo zokucoca ikhonkco njengoko zinokufakwa ngokulula phakathi kwamalungu kunye nokushiya izithuba. Zikulungele ukuxuba kunye nokudibanisa izityalo ezincinci kunye neentyatyambo.
Iimbiza zentsimbi zentsimbi ziyafumaneka kwimibala eyahlukeneyo eziyinika ukuba isebenze xa kusenziwa uyilo lwesicelo. Ikhaphukhaphu kwaye yomelele, iza nehuku ekhokelela ekubeni ixhonywe naphina- ukusuka kwiifestile, kwiziporo zebalkoni, kwiidesika, kwiingcingo nakwezangaphakathi.
Iingcingo zeLattice sele zintle ngokwazo, kodwa kutheni uyema apho xa unokuqhubela phambili ukuphucula ubuhle bayo ngokusebenzisa izixhobo zokucoca ucingo. Ezi mbiza zeceramic zixhaphakileyo eziphuphuma ngobumnandi bepinki geraniums zongeza umtsalane wokuhombisa kule dayimani imhlophe ucingo olubiyele .
Gcina iinkonkxa ezindala ngokuzitshintsha zenze izixhobo zokucoca iingcingo ezintle. Yonke into oyifunayo yingubo yepeyinti kunye nezinye izinto ezimnandi kunye neentyatyambo zokuphucula kwangoko ukubonakala kocingo lweenkuni.
Apha ubona indlela yokutyala yocingo enye exhonyiweyo inokwenza impembelelo ebonakalayo xa ibekwe ngokuchasene nocingo olusisiseko. Umbala okanye imbiza yeceram igcwalisa ukugqitywa kocingo, kodwa iindidi zeentyatyambo ezibekwe kuyo zenza umahluko ngokombala kunye noburhabaxa.
Iibhutsi ezindala zemvula zinokusetyenziswa njenge-quirky fence decors nayo. Endaweni yokubeka iibhutsi ezidlulileyo emgqomeni, ungaziyeki ziye kumoshakala. Gcwalisa ngomhlaba, yongeza ezinye i-petunias okanye izigidi zeentsimbi uze uzifake kwiileyili zocingo zelo lihlobiso elingaqhelekanga.
Umhlobisi weRubber Boot otyaliweyo obiyelweyo ngocingo- Attribution # 2
Iibhola zerabha zikulungele ukusetyenziswa njengezicwangcisi zocingo kuba zomelele kwaye zinemingxunya emikhulu evumela izityalo ukuba ziphefumle kwaye amanzi angene. Ukwahluka kwawo kuyilo kunye nombala kukudibanisa, njengoko kunokwenza naluphi na ucingo ukuba luhlume .
Iimbiza ezincinane zeplastiki ezizaliswe ziintyatyambo ezahlukahlukeneyo zixhonywe kwiphaneli yetreyini encanyathiselwe kwinkxaso yesinyithi. Olu hlobo lokutyala ucingo lubiza kakhulu, lubhetyebhetye kwaye kulula ukudibanisa.
Izicwangcisi zocingo zibonelela ngendlela efanelekileyo yokusebenzisa ithuba elincinci njengoko likuvumela ukuba ukhule izityalo kumanqanaba aliqela. Olunye uhlobo lwesityalo olukhula kakuhle kwaye lukhule kakuhle ngokulima ngokuthe nkqo yimifuno kunye nemifuno eliqela. Kuba zikhuliswa ngesixa esincinci, akukho mfuneko yokuba zibenomhlaba omkhulu wokulima.
Xa ikhuliswe kwizicwangcisi zocingo, iigadi zemifuno zikuvumela ukuba ufumane imveliso eninzi kwindawo encinci. Izibonelelo zalo zibandakanya ukusebenziseka ngokulula kwegadi kuba kunciphisa umsebenzi odinisayo kunye nokudinisayo wokumba nokulima. Ukongeza koku, amayeza akho afumana ukhathalelo ngakumbi kunye nokuqwalaselwa kuba afikeleleka kakhulu. Akukho sidingo sokukhathazeka ngezilwanyana zasekhaya okanye izilwanyana ezincinci ezitshabalalisa izityalo zakho kunye ngubani ongafuniyo ukufumana lula okanye ukuvuna nantoni na oyifunayo kwindawo yengalo?
Izityalo zegadi zezityalo zifumaneka ngokulula ukuthengwa kwiivenkile zokuphucula ikhaya kunye nabathengisi be-Intanethi. Zineendleko ezifanelekileyo kwaye zihlala zithengiswa njengeeseti. Ukusuka kwizityala ze-canvass ezineepokotho ukuya kwiimbiza ezincinci ezixhonywe ngentlaka, izityalo zegadi zokutyala iingcingo ziza kuluhlu olubanzi lwezixhobo, uyilo kunye nobukhulu obunokuthi umntu akhethe kuzo. Eminye imizekelo yemifuno edla ngokulinywa kwizicwangcisi zocingo yichives, i-basil, i-oregano, isilumko, iminti, iparsley kunye necilantro. Imifuno emincinci ikwafanelekile kwiigadi ezimileyo ezibiyelweyo kuba zihlala zihlwayelwa kwaye zivunwa.
Guqula iisecaleni zesakhiwo esidikayo okanye iingcingo zibe ziindonga eziphilayo ezigcwele zizityalo kunye namayeza. Olu luyilo lusetyenzisile uthotho lweebhasikiti ezilukiweyo ezixhonywe kwiislingings zodonga ethe tye.
Esi silungele ukutyala imifuno siyadityaniswa kodwa siyakuvumela ukuba ukhule ngaphezulu kwama-20 eentlobo ezahlukeneyo zemifuno kwindawo encinci. Ayisiyonto ilungele ukubiyela kuphela, kodwa ikwalungele kakhulu iipatio, iithala, iibhalkhoni, uphahla okanye nokusetyenziselwa ngaphakathi.
Ukutyala imifuno eXineneyo yeGadi ethe nkqo - Imvelaphi
Esi sixhobo sokutyala sixhonywe ngokuthe nkqo esivumayo sivumela indlela elula kodwa enobuchule yokukhulisa ukutya kwakho. Indlela efanelekileyo yokusebenzisa isithuba esincinci segadi, izibonelelo zokusebenzisa esi sityalo silungisiweyo kubandakanya ukufakwa ngokulula, ukufumaneka lula kunye nokufikeleleka.
Isitiya semifuno esime nkqo sisisombululo sasekhaya ngenxa yenkqubo yokunkcenkceshela ye-DIY. Ucingo olucacileyo lwebhodi yabucala ilungiswe kunye neeshelfu ezinendlu eyahlukeneyo yemifuno kunye nemifuno. Ayisiyomthendeleko we-ewe kuphela, kodwa ikwanelisa nokukhulisa yonke into oyifunayo ngaphakathi kwekhaya lakho.
Igadi yeHerb yegadi
Ukuhamba ngebhayisikile yindlela yangoku uninzi lwazo ziyenzela ngokwakho iiprojekthi njengoko ziguqula izinto ezisetyenzisiweyo zibe yinto entsha. Endaweni yokulahla amavili amadala kunye neebhotile zeplastikhi zesoda, ziguqule zibe zizityalo ezizodwa ezijingayo zemifuno yakho - ayizukugcina imali kuphela, kodwa inciphisa nenkunkuma.
IClematis - I-Clematis luhlobo lomdiliya onyukayo onika imibala eyahlukeneyo yentyatyambo, iimilo kunye nobukhulu. Yinto engapheliyo ekhula ukusuka kwi-3 ukuya kwi-20 yeenyawo ubude kwaye isasazeka i-4 ukuya kwi-30 yeenyawo ububanzi ngokuxhomekeka kwindidi eyahlukeneyo. I-Clematis ibonakaliswe ngemithi yeediliya, amagqabi asetshati kunye neentyatyambo ezinomtsalane ezihlaza okwesibhakabhaka, ezipinki, ezibomvu okanye zimhlophe ngombala. Iyafumaneka kwiintlobo ezahlukeneyo zemifuno ezilungele ukukhula kwizikhongozeli zezityalo ecaleni kwezicingo, iidesika, iibhalkhoni kunye neepatios, ngelixa udidi oluphakathi lulungele ukugubungela iindonga kunye neengcingo ezibiyelweyo.
I-Clematis iyachuma kuwo onke amaxesha onyaka-ukusuka ekwindla kuye ebusika. Ulondolozo lulumkile, ludinga umhlaba ofumileyo ofumileyo kunye nokukhanya okugcweleyo kwelanga ukuze uqhakaze kwaye ukhule ngokupheleleyo. Ukongeza koku, ikwafuna kuphela i-intshi yokubonelela ngamanzi ngeveki kunye nokuthena unyaka nonyaka. Izibonelelo ezongezelelekileyo zokukhula kweClematis zibandakanya ukutsala iintaka kunye neebhabhathane ngenxa yevumba layo kunye nokulungela ngokupheleleyo ukwenza igadi yesikhongozeli. Iintlobo zayo eziqhelekileyo yiBlue Ravine Clematis (iintyatyambo ze-lilac), iDuchess yaseAlbany Clematis (i-tulip efana neentyatyambo ezipinki), iDuchess yase-Edinburgh Clematis (intyatyambo emhlophe emhlophe) kunye neBlue Light Clematis (iintyatyambo ezimbini ze-lavender).
Honeysuckle I-Honeysuckle luhlobo lokhathalelo olulula kunye nokunyuka okuncinci kokugcina okuphawuleka ngokwamaqela eentyatyambo ezimilise ityhubhu kunye namagqabi eetshati. Ihlala ikhula ukuya kubude beenyawo ezingama-20 kwaye inyuke ukuya kwii-25 iinyawo ububanzi. Iintyatyambo zivela kwiindidi ezipinki, ezityheli, ezibomvu nezimhlophe ezenza ukuba ukongeza umdla kwiigadi nakwizikhongozeli zezityalo.
I-Honeysuckles ikwanalo nevumba elimnandi nencindi etsala iingcungcu kunye namabhabhathane. Ifuna ilanga elipheleleyo ukuze lidubule nto leyo ebenza bubekezelele ubushushu kwaye inokuphila kwiintlobo ezahlukeneyo zomhlaba. Kuba ii-honeysuckles zininzi kwaye kulula kakhulu ukuzikhulisa, kuyakuthatha ixesha elincinci kakhulu ukuyihlakulela ukugubungela ucingo olukhulu, i-trellis okanye udonga lwe-perimeter.
Izidiliya ze Honeysuckle zineentlobo ezingaphezu kwe-180 ezahlukeneyo kodwa ezona zithandwa kakhulu yi-Common Honeysuckle Vine (iintyatyambo ezipinki), i-Yellow Honeysuckle Vine (iintyatyambo zegolide ezityheli ezijika zibe ziziqhamo ezibomvu), iGold Flame Honeysuckle Vine (iintyatyambo eziqaqambileyo ezimthubi) kunye neDropmore Scarlet Honeysuckle Vine (iintyatyambo ezibomvu).
Umdiliya weXilongo Ikwabizwa ngokuba yiTrumpet Creeper, iVilongo leXilongo luhlobo olukhula ngokukhawuleza kwaye luphawulwa ngamaqoqo eentyatyambo eziqaqambileyo ezihlala zimthubi, orenji okanye bomvu ngombala ngamagqabi asetshati. Ihlala isasazeka ukuya kuthi ga kwi-40 yeenyawo ububanzi kwaye inokufikelela kubude be-8 ukuya kwi-20 yeenyawo.
Imidiliya yexilongo iyaziwa ngokutsala iintaka egadini okanye kubume bomhlaba. Yenza udibaniso olugqibeleleyo kwizikhongozeli zezityalo kunye ucingo lwegadi kuba kulula ukukhula, isasazeka ngokukhawuleza kwaye inokugubungela lonke udonga ngexesha elifutshane. Ikwahluka kakhulu kuba iyayinyamezela imbalela, kodwa kwangaxeshanye inokunyamezela iinyanga ezibandayo zobusika.
Ngokwenkathalelo efanelekileyo kunye nolondolozo, kufuneka ilanga elipheleleyo likhule kunye nokuthenwa ngamaxesha ngamaxesha ukuze kuligcine liphantsi kolawulo. Kwakhona, ukuba ucwangcisa ukulima imidiliya yexilongo, qiniseka ukukhetha indawo efanelekileyo kunye nesakhiwo esomeleleyo ukuyibamba kuba inokuthatha indawo ngokukhawuleza. Iindidi zayo eziqhelekileyo sisiVini seXilongo eliqhelekileyo (iintyatyambo zeorenji), Ihlobo lasehlotyeni leXabiso leXilongo (iintyatyambo ezibomvu zeorenji) kunye noMdiliya weXilongo oMthubi.
Iwisteria I-Wisteria luhlobo lomdiliya olunamavumba aqholiweyo, oxhonyiweyo, umdiliya ofana neblue, violet okanye iintyatyambo zelavenda. Ngexesha lokuwa, amagqabi awo ajika abe ngumbala otyheli owenza ukuba ubenomtsalane ngakumbi. Iintyatyambo zayo ziqhakaza ngokupheleleyo ngexesha lentwasahlobo kwaye zinokufikelela kwiinyawo ngobukhulu. Isityalo sonke, nangona kunjalo, sinyuka siye kwi-30 yeenyawo ububanzi kwaye sinokufikelela kubude be-8 ukuya kwi-20 yeenyawo.
I-Wisteria kulula ukuyikhulisa kwaye isasazeka ngokukhawuleza, iyenza ukuba ibe lukhetho oluthandwayo locingo, iindonga, iipergoli kunye nolwakhiwo lwangaphandle. Ekukhuleni olu hlobo lomdiliya, beka indawo njengeyona nto iphambili kuba ifuna ukubonakaliswa lilanga ngokupheleleyo ukuze lidubule ngokupheleleyo. Ikwafuna umhlaba ofumileyo otyebileyo kodwa uya kuchuma ngokufanelekileyo kwiintlobo ezininzi zomhlaba. Njengomdiliya weXilongo, iWisteria inomdla wokungangenisi njengoko isanda ngamandla, ke qiniseka ukuba ithenwe ngokwaneleyo kwaye ichetyiwe ukuyigcina iphantsi kolawulo.
Nangona kunjalo, le midiliya ingaqeqeshwa njengoko ikhula ngokudibanisa isiqu esime nkqo kwinkxaso. Omnye umqobo kwesi sityalo onke amalungu alo, ngakumbi imbewu, anetyhefu. Ezinye zeentlobo zazo ezithandwayo yiPink Wisteria, iWhite Wisteria kunye neBlue Moon Kentucky Wisteria (iintyatyambo eziluhlaza okwesibhakabhaka).
Umdiliya omnyama uSusan Vine - Isetyenziswa ngokuxhaphakileyo ekuxhonyweni kweebhasikithi kunye nezikhongozeli zezityalo ecaleni kweedreyiki, ukuthuka kunye nokubiya, i-Black Eyed Susan Vine yinto elula yokhathalelo ekhula njengonyaka. Yenziwe ngombala omileyo, omilise okwentliziyo, amagqabi aluhlaza aphakathi kunye ne-daisy efana neentyatyambo ezintlanu ezenziwe ngeentyatyambo ezinombala omdaka oqinileyo ukwenza iziko. Iyafumaneka kuluhlu olubanzi lwemibala etyebileyo enjengeorenji, mthubi mthubi, mthubi mthubi namhlophe.
Umdiliya onamehlo amnyama we-susan ungasasazeka ukusuka kwi-2 yeenyawo ukuya kwi-3 yeenyawo ububanzi kwaye unokufikelela kubude be-6 ukuya kwi-8 yeenyawo ubude, nangona kunjalo, ukuba ukhulile njengonyaka akunakufikelela kubungakanani obuvuthiweyo. Esi sityalo sithandwayo kulula ukusasaza kwaye sikhula kakuhle kwiindawo ezinemozulu efudumeleyo. Ifuna ilanga elipheleleyo, umhlaba ofumileyo ofumileyo kunye namanzi aphakathi ukuze uphile. Ngokungafaniyo nezinye iintyatyambo / imidiliya ekhankanywe apha ngasentla, olu hlobo lwesityalo lufuna inkathalelo eyodwa. Kufuneka ithenwe kancinci kwaye ibotshelelwe kwizakhiwo njengoko zikhula.
Ngaphandle kwalonto, ikwanalo nekhontrakthi yezinambuzane ezifana nabamhlophe, isikali kunye ne-whitefly. Ezinye zeentlobo zayo ezithandwayo yiAfrican Sunset (iintyatyambo zebhaskithi / ezibomvu / zendlovu ezineziko le-burgundy), i-Angel Wings (iintyatyambo ezimhlophe ezinuka kamnandi), iSuperstar Orange, iSusie Mix (tyheli, orenji, iintyatyambo ezimhlophe) kunye neSpanish Eyes (iintyatyambo zepesika)
Uzuko lwasekuseni - Uhlobo lomdiliya olukhuliswa njengonyaka, Uzuko lwasekuseni lulungele ukugubungela i-trellises, udonga lomjikelezo kunye neengcingo. Esi sityalo sikhula ngokukhawuleza sibonakala ngamagqabi amilise okweentliziyo kunye nexilongo okanye iintyatyambo ezimilise iintyatyambo ezivulwa kusasa zize zivale. njakalanga. Iyafumaneka kuluhlu olubanzi lwemibala efana nomhlophe, pinki, bomvu, tyheli, bhlowu nemfusa. Inokufikelela kubude bee-8 ukuya kwii-20 iinyawo kwaye inyuke iye kwi-15 yeenyawo. Iintyatyambo zihlala zidubula ehlotyeni ukuwa okanye ukusukela kwinyanga kaMeyi ukuya kweyoMsintsi.
Lukhetho oluthandwayo kwizikhongozeli zezityalo, kuba kufuna ulondolozo olusezantsi. Xa ukhulisa isityalo soZuko lwasekuseni, qiniseka ukukhusela kwindawo efumana ukukhanya kwelanga okuninzi. Yinkcenkceshele kube kanye ukuya kabini ngeveki kodwa ukuba igcinwe kwizikhongozeli zezityalo, zinike ubonelelo olongezelelekileyo lokufuma. Kuyaziwa ngokunyamezelana nomhlaba owomileyo kunye nokukwazi ukuchuma kwiindawo ezingakhathalelwanga okanye eziphazamisekileyo. Ezinye zeentlobo zazo ezithandwayo zibandakanya iGlacier Blue Morning Glory (umgubo weentyatyambo eziluhlaza okwesibhakabhaka ezinemigca eluhlaza okwesibhakabhaka yaseFransi), iScarlett O 'Hara Morning Glory (iintyatyambo ezibomvu ezibomvu ngomqala omhlophe), ubuqaqawuli baseZulwini obuBlue (iintyatyambo eziluhlaza okwesibhakabhaka) kunye noTatomkhulu Ott Morning Glory ( iintyatyambo ezimnyama zimfusa).
Intyatyambo - Olu hlobo lomdiliya alwaziwa kuphela ziintyatyambo zalo ezithandekayo kodwa lusebenza njengesityalo semifuno. Ifumaneka kuluhlu olubanzi lweentlobo, ezinye iindidi zazo zinamahlahla, ezinye ziziidiliya, ngelixa ezinye zivelisa iziqhamo ezityiwayo.Iimpawu zeentyatyambo eziethe-ethe ezinama-5 ukuya kwi-10 amagqabi asicaba anesiqu esijikelezileyo njengemisonto edla ngokuba zi-intshi ezi-6 in ubungakanani. Amagqabi awo ahlala evulwe kwaye enza iidiliya ezinyuka ziye kufikelela kwi-15 ukuya kwi-30 yeenyawo kwaye zifike kubude be-6 ukuya kwi-8 yeenyawo.
Intyatyambo enomdla inevumba elinamandla elitsala intabalala yezilwanyana zasendle. Indawo efanelekileyo yokukhulisa olu hlobo lweediliya zihamba kunye neengcingo, i-pergolas okanye i-trellises. Ayikwazi ukunyamezela ubusika obubandayo kakhulu kwaye ifuna umthunzi okhethekileyo kwilanga eligcweleyo ukuze idubule impilo. Ikwafaneleke kakhulu kulimo lwekhonteyina lo gama nje umhlaba utyebile kwaye ugcinwe ufumile. Ukuthenwa kukwacetyiswa ukuba kugcinwe ulawulo lukhulu. Iindidi zayo ezaziwa kakhulu yiMaypop Passion Flower (uhlobo lwamayeza) kunye neruby Glow Passion Flower (i-cranberry enuka kamnandi kunye neentyatyambo ezimfusa nzulu).
Umbhobho waseDatshi - Ukwabizwa ngokuba ngumdiliya wombhobho okanye i-birthwort, olu hlobo lomdiliya oneenkuni luneentyatyambo ezinamachaphaza ezimile okweepayipi ezibukhali ezinamagqabi amilise okwentliziyo. Ayisiyiyo kuphela imbonakalo eyoyikisayo, kodwa ikwanalo nevumba elothusayo elithandekayo elifana nevumba lokubola kwenyama. Ubungakanani bayo buhlala buzi-10 ukuya kwii-25 iinyawo ubude kwaye iintyatyambo ziqhakaza ngexesha lasentwasahlobo ukuya ekuqaleni kwehlobo.
Enye yeepropathi zayo zibandakanya ukukwazi ukutsala izinambuzane eziluncedo ezinjengeebhabhathane. Umbhobho waseDatshi ukhetha umthunzi okhethekileyo kwilanga elipheleleyo kwaye ufuna umhlaba ofumileyo ofumileyo kunye namanzi amaninzi. Ngenxa yevumba layo, ayicetyiswa ukuba ibekwe kufutshane neminyango, kodwa inokulinywa ngocingo kwixabiso elilawulwayo.
Imbotyi yeHyacinth - IHyacinth Bean ngumdiliya onamandla wokuhombisa okhuliswe njengonyaka. Ibonakaliswe ngombala opinki, ililac ukuya kwintyatyambo emfusa eneebhotshi ezizodwa ezibomvu ezibonakala njengee-lima bean pods. Ezi pods azityiwa kodwa ziyhombiso nje kuphela. Kukulungele ukongeza ukukhanya okubalaseleyo kombala kunye nomdla obonakalayo omangalisayo kwiingcingo, iibhalkhoni, iipergoli, iibhalkhoni kunye neepaki. Ikhula ubuncinci i-10 ukuya kwi-15 yeenyawo ukuphakama kwaye ifuna isakhiwo esomeleleyo sokukhwela kuyo. Iimbotyi zeHyacinth ezimfusa zinokuphumelela phantse phantse naluphi na uhlobo lomhlaba kodwa alunakusinda kwimozulu ebandayo. Ulondolozo ngobulumko, lufuna inkathalo encinci kunye nokunkcenkceshela rhoqo.
Ukunyuka kweHydrangea - Uhlobo oluqhelekileyo lwesityalo esithandwayo se-hydrangea, oku kuhlala kukho amaqoqo amakhulu eentyatyambo ezincinci kunye namagqabi aluhlaza amagqabi anentliziyo aluhlaza. Ngokuqhelekileyo ikhula njenge-shrub yokugungqa kodwa inokufikelela kubude obungama-30 ukuya kuma-80 iinyawo kwaye ithathwa njengabantu abakhwela ngamandla abenza ukuba balungele kakhulu iingcingo, i-trellises, iikholamu kunye nolunye uhlobo lwangaphandle lwenkxaso. Ukuziphatha kwayo okukhulayo kuhlala kwahluka ngamanye amaxesha imidiliya yayo izisongela ijikeleze isakhiwo, ngelixa kwezinye iimeko, ineengcambu zomoya ezibambelele kwiindawo ezimileyo. Ukunyuka kwama-hydrangea kulula ukukhula kwaye kufuna umhlaba ococekileyo, omanzi, ocebileyo kunye nokunkcenkceshela rhoqo. Ukukhula kunye nokuqhakaza ngokupheleleyo, kufuna umthunzi okhethekileyo kwilanga elipheleleyo.
Akukho sidingo sokuxhomekeka kwizityala eziqhelekileyo nakwizixhobo zemveli xa uhombisa ucingo. Kukho izinto ezahlukeneyo, nokuba zindala okanye zintsha, ezinokuxhonywa, zibekwe okanye zibiyelwe ngocingo olungaphezulu ukuze zibenze babe nokudla kunye nokuzaliswa ngumlingiswa. Ukusetyenziswa kwezinto ezingaqhelekanga kubonelela ngento enomdla ngelixa likuvumela ukuba usebenzise ubuchule bakho, ubuqalo kunye nobuchule.
Uvavanyo lwezinto ezingafunyanwa ngokwesiqhelo kwiingcingo ezinje ngeebhutsi ezindala zemvula, iinkonkxa zobisi ezindala ezivela kwintengiso yentakumba, okanye kwaneengxowa zokuthwala. Buyisela izinto ezindala ezifana neepelethi zomthi, iikreyiti zomthi, iibhotile kunye neejagi. Funda ukudibanisa kunye nokudibanisa ukuhonjiswa kunye nokwenza indleko ezifanelekileyo, ezithandwayo kunye nesisombululo esifanelekileyo kuhlobiso lwakho locingo.
Olona ncedo luphambili lokuba uzenzele ngokwakho ii-decors zothango kukuba ibonelela ngeendlela ezizezakho ezizodwa emva kweemfuno kunye nokukhethwa kwesitayile. Unokulandela umxholo othile okanye wenze uyilo olubonisa ubuntu bakho. Amathuba oyilo akanasiphelo xa kufikwa kwimibono yocingo. (Ndwendwela eli phepha nangakumbi izimvo zebhokisi yeentyatyambo )
Iindidi ezahlukeneyo zeentyatyambo ezibekwe kwiibhaskiti ezijingayo zilungile ukuba ufuna ukongeza umbala ogqamileyo wombala ocacileyo ocingweni lwakho. Izityala eziphindaphindayo ezixhonywe ngeentyatyambo ezincinci ezityheli zinika olu cingo imvakalelo efudumeleyo yelanga.
Ukwenza uthango lube nomdla ngakumbi, cinga f ngebhokisi ngokwemihlobiso. Endaweni yokuphosa ibhayisekile endala, yinyuse ngapha kocingo kwaye uyisebenzisele ukubamba uhombiso iibhokisi zeentyatyambo kunye nobisi lwe-rustic banokutyala. Le yeyona ndawo kugxilwe kuyo ngokuqinisekileyo iya kuba sisiqwengana sencoko yeendwendwe ezize kutyelela.
Iingcingo zamatye zendalo ngamanye amaxesha zinokubonakala zicacile kwaye ziyadika, kodwa ukongezwa kwezilimo ezilinywe kakuhle, ezinomdla zokukhulisa ii-petunias zongeza umbala obonakalayo ofunekayo owenza le ndawo ingaphandle ibenomdla kwaye ikhuthaze. Olu luyilo lokutyala ucingo lwenze ukuba lusebenzise isitayile se-shutter okanye iplati yokhuni olungqengqelekileyo njengendawo yangasemva yokubamba ii-ledges ngeembiza zezityalo kunye nezikhongozeli ezimibalabala. Ukuhonjiswa kukwangumdlalo ogqibeleleyo wesitayile sefenitshala yangaphandle eyenziwe ngomthi kule patio incinci.
Olu lucingo lukhulu lwabucala lunamacala amancinci amancinci akhiwe kwiishelufa ezizaliswe yimidiliya. Ngaphandle kwendlela encinci yokunyusa indawo yokulima eyadini, ikwahlangana kakuhle nolwakhiwo lwangoku oluphefumlelweyo kunye nezinto.
Inkangeleko engagqitywanga yale yokutyala ucingo lwekhonkrithi igcwalisa ucingo oluhlaza olujikelezileyo olujikelezileyo olubiyele ibhodi ethe tyaba. Emva koko ihonjiswe ngezikhondo zentshebe zekati ukugqibezela ukuvezwa kwemizi-mveliso kunye nokungekho sesikweni ngalo mgodi wegrill yangaphandle.
Ukophula i-monotony yolu cingo lobunkunkqele lugcwele ubumfihlo, ii-niches zoxande zibandakanyiwe kwiibhodi ezithe tyaba kwaye zisetyenziselwa ukufaka amagqabi aluhlaza kunye neentyatyambo.
Ulwabiwo # 1 I-KJPayne ukusuka kwiFlickr (iLayisensi ye-Creative Commons)
Isabelo # 2 mzantsiweb ukusuka kwiFlickr (iLayisensi ye-Creative Commons)
Ukufumana eminye imifanekiso ndwendwela eyethu Izimvo zokutyala ikiriva igalari apha.
Izityalo zeHirt's Baltic English Ivy 8 Izityalo- Hardy Groundcover -1 3/4 'Iimbiza $ 10.39$ 17.00 umthengisi ogqibelele Izimvo eziyi-351 UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Iimfuno zeMbewu, uMdaka oMnyama weSusan uMdiliya weVini (iThunbergia alata) ... $ 8.85 umthengisi ogqibelele Izimvo eziyi-391 UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Ngaphandle kwephrinti ye-Purple Hyacinth Bean Red Leaved Plant Vine S… $ 6.49 umthengisi ogqibelele (961) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA Iintengiso zeAmazon
apho unetheko le-bachelorette
izipho zomtshato ezizodwa kwizibini ezitshatileyo
eyakhe kunye neesuti zokuqubha ezifanayo